SMSContactPhotos7, सन्देशहरूमा सम्पर्कको फोटोहरू थप गर्नुहोस् (Cydia) | आईफोन समाचार
SMSContactPhotos7, सन्देशहरूमा सम्पर्क फोटोहरू थप्नुहोस् (Cydia)
हामीसँग आजका दिनहरू भएका सिडिया अनुप्रयोगहरूको ब्यारेज ठूलो छ। पुरानो अनुप्रयोगहरूका अद्यावधिकहरू, र नयाँ अनुप्रयोगहरू, केहि बढि शानदार, अन्यहरू सरल, केहि भुक्तान गरिएको, र अन्य निःशुल्क। आज नयाँ अनुप्रयोग, निःशुल्क र सरल, तर एकदम चाखलाग्दो विश्लेषण गर्ने पालो हो। SMSContactPhotos7 Cydia बाट एक नयाँ चिमना छ कि कुराकानीमा सम्पर्क छविहरू थप्नुहोस् IOS7मा सन्देश अनुप्रयोग प्रयोग गरीरहेको छ।
बायाँमा छविमा तपाईं सन्देशहरू अनुप्रयोगमा आईएसओ7ले कुराकानी देख्न सक्नुहुन्छ जुन आईओएस it ले स्वदेशी रूपमा देखाउँदछ। एकचोटि SMSContactPhotos7 स्थापना भएपछि, केहि कन्फिगर नगरी, अनुप्रयोगले एकतर्फी, कुराकानी विन्डोमा रहेको सम्पर्कको फोटो देखाउँदछ, र यदि हामी कुराकानीमा प्रवेश गर्दछौं, हामी तिनीहरूमा सहभागी हुनेहरूको फोटोहरू देख्दछौं। यसको लागी हामीसँग हाम्रो एजेन्डामा थपिएका सम्पर्कहरूका फोटोहरू हुनुपर्दछजस्तो स्पष्ट छ।
यो चिमटा सिडियामा पहिले नै उपलब्ध छ, बिगबास रेपोमा, र म भन्छु, यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ। यसले हाम्रो स्प्रिboardबोर्डमा कुनै आईकन सिर्जना गर्दैन, यसले सेटि Settings भित्र कुनै मेनु सिर्जना गर्दैन, त्यसैले तपाइँ यसलाई पूर्ण रूपमा कार्य गर्नको लागि पूर्ण रूपमा केहि पनि गर्नुपर्दैन। एक चिमतो स्थापना गर्न र जान, सरल असम्भव। यसलाई आईओएस requires को स्थापना गर्न आवश्यक छ र नयाँ आईफोन ss को साथ पनि उपयुक्त छ।
के तपाईंलाई हाम्रो थाहा छ? iOS with को साथ उपयुक्त Cydia अनुप्रयोगहरूको सूची? सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगहरूको साथ सूची जुन हामीले सिडियामा फेला पार्न सक्छौं, संकेत गर्दै यदि तिनीहरू आईओएस with का साथ उपयुक्त छन्, संस्करण जुन यो अनुकूल छ, र यदि यो आईफोन 5s र यसको नयाँ A7 प्रोसेसरसँग पनि उपयुक्त छ। एक चोटि हेर्नुहोस् र यदि तपाईंलाई सूचीमा समावेश नभएको कुनै आवेदन थाहा छ भने, तपाईंले त्यसलाई भन्नुपर्दा तपाईले यस्तै भन्नु पर्छ।
थप जानकारी - आईओएस and र नयाँ आईफोन s हरूसँग मिल्दो साइडिया अनुप्रयोगहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » SMSContactPhotos7, सन्देशहरूमा सम्पर्क फोटोहरू थप्नुहोस् (Cydia)
एक प्रश्न, तपाइँको फोटो राख्न के गर्नुहुन्छ यदि यो सेटिंग्स मा आइकन वा मेनू छैन भने?
Nery लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले मेरो एजेन्डामा डाटाको साथ सम्पर्क सिर्जना गरेको छु।
ठीक eentocnes छोड्नुहोस् र प्रयास गर्नुहोस्, के तपाइँ बिटा copyc राम्रो छैन लाग्दैन? मसँग आईफोन ss छ
Chuii Alvarado (@ Chuii4u) भन्यो
तपाईका पोष्टहरूका फ्यान लुइस, धेरै सहयोगी।
Chuii Alvarado (@ Chuii4u) लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई थाहा छैन कसरी मेरो फोटो कुराकानीमा राख्ने। यदि कसैले अझ राम्ररी बुझाउँछन् कृपया !!
तपाईंले आफ्नो डाटाको साथ सम्पर्क थप्नु पर्छ।
एक डाउनलोड गरिएको (जेलब्रेक) को लागि व्हाट्सएप सन्देश टोन कसरी बदल्ने।
TetherMe (Cydia) को प्रयोग गरेर आईफोनबाट इन्टरनेट कसरी साझेदारी गर्ने